Baaritaanka fayraska korona iyo qiimeynta astaamaha
Haddii aad qabto wax astaamo ah oo muujinayo inaad qabto korona fayras, wac khadka caawinta ee Espoo, tel. 09 816 34600 (Isniin–Jimco 7:00–18:00)
Baaritaanka fayraska korona waxaa heli karo qof walba oo qaba astaamo muujinayo inuu ku dhacay fayraska korona, sida qandho, qufac, cune-xanuun, dilliliq ama cabbur, neef-yari, luminta dhadhanka ama urta, shuban ama calool-xanuun aan lahayn sabab muuqata.
Helsinki, Espoo iyo Vantaa waxay kugula talinayaan inaad xirato maaskarada wajiga markaad isticmaalayso adeegyada magaalada
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa waxay dadka da'doodu tahay 15 iyo wixii ka weyn kula talinayaan isticmaalka maaskarada wajiga/waji shareerka marka la isticmaalayo adeegyada magaalada, mar kasta oo aan laga fogaan karin dadka kale. Taladu waxay khuseysaa meelo kala duwan sida maktabadaha, goobaha isboortiga, matxafyada, meelaha adeegyo laga helo iyo dugsiyada sare kaasoo la dhaqan gelin doono waqti aan ka danbayn 1 Oktoobar 2020.
Arrinta ugu muhiimsan waa in aad dadka kale u jirsato 2 mitir oo masaafada ammaanka ah gacmahana aad inta badan dhaqdo. Haddii aad qabto calamaadaha cudurka, joog gurigaaga. (InfoFinland.fi)
Ku soo dejiso telefoonkaada ablikeeshinka Koronavilkku
Ablikeeshinku wuxuu gacan ka gaystaa helitaanka dadka laga yaabo in ay qabaan cudurka fayruska Korona. Haddii cudurka lagaa helo, waxaad ku soo gudbin kartaa ablikeeshinka adigoo aan magacaada sheegin. Waxaa kale oo uu ablikeeshinku kugu soo wargelinayaa, haddii aad u dhowaatay qof uu cudurku ku dhacay.
Isticmaalka Koronavilkku waa mid ammaan ah. Koronavilkku waa ablikeeshin ay Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL) soo saartay, kaas oo ku shaqeeya Finland.
Ablikeeshinka lacag la’aanta ah waxaad ka soo dejisan kartaa bogagga Koronavilkku.fi.
Ablikeeshinka waxaa lagu isticmaali karaa luqadda finnishka iyo iswiidhishka. (InfoFinland.fi)
Lambarka laga qabsado ballanta ee xarumaha caafimaadka ee Espoo ee arrimaha kale, tel. 09 816 34500, Isniin–Jimco 7:00–18:00.
Maalin kasta waa muhiim inta lagu gudajiro safmareenka korona fayras
Adeegyada daryeelka ee qoysaska leh carruurta, tel. 09 816 23600, Isniin–Jimco 8:30–15:00.
Khadka caawinta adeegyada bulshada iyo gargaarka cuntada, tel. 09 816 45000, Isniin–Jimco 8:00–12:00
Jardiinooyinka degganeyaasha way furan yihiin. Ha booqan jardiinooyinka haddii aad xitaa in yar jirran tahay. Waxqabadyada kaliya waxaa lagu qabtaa bannaanka dhismeyaasha, iyadoo la hubinayo masaafo isku jirsashada nabdoon.
Ku dhaq gacmahaaga saabuun inta badan oo ku qufac gacmo-dheerahaaga.
Xusuusnow inaad masaafo nabdoon oo 1–2 ah isku jirsataan adiga iyo dadka kale.
Waxbarashada hore caruurnimada
Xarumaha daryeelka maalinta way furan yihiin. Waxaa kaliya laguu oggol yahay inaad aado xarun daryeel oo maalinta furan haddii aad caafimad qabto.
Isboortiga iyo jimicsiga, dhaqanka iyio dhalinyarada
Barkadaha dabaasha, barkada dabaasha ee ku taala dhismaha bannaankiisa iyo barkada baratanka ee Tapiola way furan tahay. Xeebaha waxaa kormeeri doonna ilaalada nolosha ilaa 16-ka Agoosto 2020.
Maktabadaha iyo matxafyada way furan yihiin.
Xarumahaaga waxay furmi doonaan gudaha Agoosto.
Rugaha adeegga ee caasimadda way furan yihiin sidii hore.
Ha booqan Rugaha Adeegga haddii aad jirran tahay.
Adeegyada loogu talagalay ganacsatada
Haddii aad tahay ganacsade, waxaad codsan kartaa taageero hawlwadeen (YURUB 2,000). U akhri tilmaamaha si taxaddar leh.
Iska ilaali safarka aan loo baahneyn. Xannibaadaha saaran soo gelitaanka wadamada qaarkood waa la qaaday. Waad u safri kartaa wadamadaan. Liis la cusbooneysiiyay oo ku jiro mareegta Dawladda.
Adeegga telefoonka Kela ee ku qoran Carabi, Soomaali iyo Ruush
Adeegga wuxuu furan yahay Isniin kasta, Arbaco kasta iyo Jimco kasta laga bilaabo 9:00 ilaa 12:00.
Carabi 020 6344 902
Soomaali 020 6344 905
Ruush 020 6344 901